Izindaba - Ukude thumela iphupho le-acacia lamaShayina, izinkulungwane zamamayela lapho kuhlangana khona
Ukude thumela iphupho lamaShayina omtholo, izinkulungwane zamamayela lapho kuhlangana khona
Umkhosi Wamaphakathi Nekwindla uba ngosuku lwe-15 lwenyanga yesi-8 ekhalendeni lenyanga.
Inganekwane ithi u-Hou Yi no-Chang'e babehlala ndawonye emhlabeni. Ngolunye usuku, u-Chang'e wayewasha izingubo ngasemfuleni lapho ebona umfanekiso wakhe emanzini futhi waqaphela ukuthi wayesemdala. Ngakho u-hou Yi waya e-kunlun eyothola Umama weNdlovukazi futhi wacela i-elixir yokungafi.INdlovukazi Umama wabonga uHou Yi ngokubulala ama-SUNS ayisishiyagalolunye futhi wasindisa isintu, ngakho wamnikeza amaphilisi amabili.Uma uphuza iphilisi elilodwa, uzophila phakade.Uma uphuza amaphilisi amabili, uzoba umuntu ongafi.
Nokho, lolu daba kwakungokuthi umfundi ka-Yi uFeng Meng wayazi, uFeng Meng wayeyoba nomqondo omubi wokweba umuthi.Ngolunye usuku, lapho u-Yi eyozingela nabanye abafundi, waphoqa u-Chang e ukuba anikeze amaphilisi.Ebona ukuthi wayengefani. kuFeng Meng, u-Chang e wagwinya womabili amaphilisi futhi wandizela enyangeni.
Ngalolu suku, abantu bavame ukuya emfuleni i-Qiantang ukuyobuka i-tide.Icilongo lomfula i-Qiantang - indawo emise okwesimo, lapho igagasi lifika, kuphuma umbukwane.Emfuleni i-qiantang, njalo uMkhosi Wamaphakathi Nekwindla, uyaphithizela, uyachichima.
Ngaphezu kwalokho, ukwazisa inyanga kuwuhlelo olubalulekile. U-Li Bai ubhale ukuthi “amahora awayazi inyanga, biza ipuleti le-jade elimhlophe, futhi ungabaze isibuko sabo se-Tai, undize ekupheleni kwe-qingyun.” Futhi ezinye izimbongi zibhale izinto ezimangalisayo ngazo. inyanga.Njalo uMkhosi Wamaphakathi Nekwindla ngalolu suku, inyanga izoba yindilinga ekhethekile, igqame ngokukhethekile.E-Ningbo kunesisho sakudala esithi “inyanga ngoSuku lwe-15 ingumjikelezo oyishumi nesithupha”, ngakho abantu abaningi bazophinde bakhethe ubusuku be-16, lungisa izithelo ezintsha namaqebelengwane enyanga, khetha indawo evulekile, umoya opholile, kuyilapho ujabulela inyanga ngenkathi uhleka.
IMid-Autumn Festival, iphinde ibe usuku lokuhlangana kwemindeni.Izihlobo ziyahlangana ukuze zixoxe, zidle, ziphuze itiye futhi zivakashele izalukazi.Labo abakude namakhaya bazofona besho ukuthi baphephile uma bengasakwazi ukubuya. .
Inyanga esibhakabhakeni, ikhumbula ingqondo yami nxazonke, kodwa ubusuku benyanga, unyaka nonyaka ngibheke phambili ekuhlanganeni;U-Miss usabalalisa izinkulungwane zamamayela, i-SMS ithumela izifiso, u-tianya uzizwa njalo, uxhumano lwegazi;Njalo ngezikhathi zamaholidi, inhliziyo iyathumela. inyanga thandazela ukuhlangana kabusha, qoqa igesi ye-Yin Ngifisela wonke umuntu injabulo yomndeni, inhlanhla intokozo, uMkhosi ojabulisayo Wamaphakathi Nekwindla!